Talooyinka Pipette, Isticmaalayaasha PCR, Dhalooyinka Reagent - ACE
Saxanka Deep Well
Dhegaha Otoscope Specula
Hel shaybaarro bilaash ahTag
Z Suzhou ACE Biomedical Technology Co., Ltd. waa shirkad xirfadlayaal ah oo ay ka go'an tahay inay siiso adeegsi tayo sare leh oo la iska tuuri karo iyo shaybaarada la isticmaalo ee isbitaalada, rugaha caafimaadka, sheybaarada baarista iyo sheybaarada cilmi baarista nolosha.
Waxaan khibrad ballaaran u leenahay cilmi baarista iyo horumarinta balaastigga sayniska nolosha waxaanna soo saarnaa agabyada ugu isticmaalka badan deegaanka iyo isticmaaleyaasha noolaha dabiiciga ah. Dhammaan alaabteenna waxaa lagu soo saaray fasalkeenna 100,000 oo nadiif ah. Si loo hubiyo tayada ugu fiican ee buuxisa ama dhaafta heerarka warshadaha, waxaan isticmaalnaa kaliya alaabta ceeriin ee bikradda ah ee ugu tayada sareysa si aan u sameyno alaabtayada…
Ku takhasusay qaybaha tirakoobka sare iyo qaybaha biolab
Talooyinka Universal Pipette
Hamilton STAR CO-RE talo
Tecan LiHa RSP Talo
Tilmaamaha Talooyinka MCA
350ul 96 Wareeg wanaagsan saxan V hoose
350ul 96 Wareeg wanaagsan saxan U hoose
96 Talo Combs
Tan iyo markii la aasaasay, ACE waxay u heellan tahay soo saarista iyo bixinta adeegyo caafimaad iyo sheybaar sare macaamiisheenna.
1. Tikniyoolajiyad wax soo saar casri ah
2. Bixi oraah tartan ah
3. Bixi adeeg aad u fiican kadib iibka
Injineerro xirfadleyaal ah
Dhammaan alaabooyinkayaga waxaa loogu talagalay injineero khibrad leh.
Macaamiisheena in ka badan 20 dal.
OEM ADEEG IYO HORUMAR
ugu dambeeyay war
Taarikada ceelasha dhaadheer
ACE Biomedical waxay bixisaa tiro balaadhan oo ah mikroflate aad u qoto dheer oo nadiif ah oo loogu talagalay codsiyada helitaanka bayoolojiga iyo xasaasiga ah. Microplate-yada qoto dheer ee qotada dheer waa qayb muhiim ah oo ka mid ah balaastikada shaqeynaya ee loo isticmaalo diyaarinta muunada, keydinta isku dhafka, isku darka, gaadiidka iyo ururinta jajab. Waxay ...
Samee Xaaskiisa Sifee ...
Sheybaarka dhexdiisa, go'aamada adag ayaa si joogto ah loo sameeyaa si loo go'aamiyo sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo tijaabooyin iyo tijaabooyin muhiim ah. Waqti ka dib, talooyinka biibiileyaasha ayaa loo habeeyay si ay ugu haboonaadaan shaybaarada adduunka oo dhan waxayna siiyaan aaladaha si farsamayaqaannada iyo saynisyahannadu u leeyihiin awood ay ku sameeyaan baaritaanno muhiim ah Tani waa mid gaar ah ...
Ma tahay Heerkulbeeg Dheg ...
Kuwa heerkulbeegyada dhegaha ee infrared kuwaas oo ku caanbaxay dhakhaatiirta carruurta iyo waalidiinta ayaa dhakhso badan oo si fudud loo isticmaali karo, laakiin ma saxbaa? Dib u eegista cilmi baarista waxay soo jeedineysaa inaysan dhici karin, in kasta oo kala duwanaanta heerkulka ay yar yihiin, waxay isbedel ku sameyn karaan sida loola dhaqmo ilmaha. Resea ...
Iyada oo loo marayo dadaallada joogtada ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay, ACE waxay u kortay inay noqoto mid ka mid ah soo saarayaasha caalamiga ah ee hormuudka u ah iyo kuwa keena alaabooyinka la adeegsado ee sheybaarka iyo caafimaadka.Waxaan si joogto ah u xaqiijin doonnaa macaamiisheenna wax soo saarka iyo adeegyada ugu fiican.